KingKong 5 Pro ala siri ike, nwere nnwere onwe dị ukwuu na iguzogide | Gam akporosis
KingKong 5 Pro ala siri ike, nwere nnwere onwe na nguzogide dị ukwuu
Emilio Garcia | | Noticias
CUBOT bụ akara amaara ama n'etiti ngwaọrụ mkpanaka siri ike, nke ahụ juru anyị anya afọ a 2021 na usoro mkpanaka ọhụrụ ya EzeKong 5 Pro. Devicesfọdụ ngwaọrụ na-adọrọ mmasị n'ihi etu ha ga-esi sie ike, maka ndị ọrụ ahụ na-ada, na-akpachapụghị anya wee kụọ ha, ma ọ bụ ndị, n'ihi ọrụ ha, chọrọ ọnụ ụzọ na-eguzogide ụdị ihe ọ bụla.
Ekele maka ụdị ọnụ a, ị nwere ike chefuo maka igbaji ma obu mmebi dị ka ọ ga - eme na ekwentị mkpanaaka ndị ọzọ ma ọ bụ nke na - apụtaghị maka mgbochi ha. Na mgbakwunye, ebe ọ dị arọ ma nwee olu dị ukwuu, mobiles ndị a na-enwekwa ụfọdụ atụmatụ ndị emepere emepe nke na-agaghị ekwe omume na ụdị nwere profaịlụ dị mkpa, dị ka nnwere onwe dị ukwuu na nke anyị ga-atụle n'okpuru.
1 Nka na ụzụ e ji mara KingKong 5 Pro
1.1 Nchedo, imewe na ngosipụta
1.2 Sistemụ nrụọrụ na ngwanrọ
2 Banyere CUBOT
Nka na ụzụ e ji mara KingKong 5 Pro
El CUBOT KingKong 5 Pro Ọ dara na Machị 19, ma ọ na-eme ya n'ike na oke mbigbọ, nwere oke njiri mara. Ọ bụghị naanị na o nwere nke ahụ ebe obibi siri ike na nchebe megide ụjọ na ihe ndị ọzọ dị na mpụgaỌ na-ezokwa ngwaike na ngwanrọ na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ọbụna karị ma ọ bụrụ na a na-atụle ọnụahịa nke ọnụahịa a, nke dị ọnụ ala.
n'etiti isi ihe site na ekwentị mkpanaaka ị nwere:
Nchedo, imewe na ngosipụta
Ọ nwere atụmatụ mara mma, yana nke ahụ ụlọ siri ike ya na nchekwa na mpe mpe akwa roba iji tinye mmetụta na enweghị emebi ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ị na-ele anya na azụ azụ, ọ nwere mmetụta carbon fiber nke na-enye ya ọmarịcha mma na egwuregwu. N'ezie, atụla anya ịdị gịrịgịrị, ebe ọ bụ na ikpe ahụ dị oke oke dịka ọ dị na mbụ n'ụdị ọnụ ndị a siri ike.
Ọzọkwa abịa echebe megide mmiri na ájá, n'okpuru akwụkwọ ikikere IP69K, ya bụ, nke kachasị elu na ụdị ya, nke na-echebe ya pụọ ​​na ntụ ntụ kachasị mma yana megide mmiri. Nọmba 6 na-egosi na ọ na-echebe ya megide ihe siri ike, dịka uzuzu, ebe 9K na-egosi na ọ nwere nchekwa megide mmiri. Ọ nwere ike ịlanarị mmiri dị n'okpuru mmiri na-enweghị mmebi, yana ụgbọ mmiri na ụgbọ elu.
Ọ bụrụ na nke ahụ ezughi gị, KingKong 5 Pro na-atụkwa n'anya site na izute ọkọlọtọ ndị agha United States Nnù-STD-810, nke a na-enweta ma ọ bụrụ na ọ gafere ọtụtụ usoro nyocha na ọnọdụ gburugburu ebe obibi na laabu ka o wee nwee ike ịrụ ọrụ na oke ọnọdụ.
Anaghị m echefu ihuenyo ahụ, nke bụ ogwe aka mmịnye ọkụ na diagonal 6.1 ”, nke mara ezigbo mma.
Sistemụ nrụọrụ na ngwanrọ
Abịa na Ejirila gam akporo 11 OEM arụnyere, ma na-enweghị ihe ọ bụla na-akpasu iwe UI ma ọ bụ ngwa. Ihe niile dị ọcha ka ị wee bido isi wee wuo ebe ọrụ gị. Na mgbakwunye, ụfọdụ ndị asọmpi siri ike ka na-eji Andorid 10, nke bụ ọghọm doro anya ma e jiri ya tụnyere KingKong 5 Pro, nke na-enye ikike niile, ọrụ na nchekwa nke ụdị ọhụrụ a. N'ezie, gam akporo 11 na-agbanwe agbanwe n'ihe gbasara nzuzo na ịdị mfe karịa ndị bu ya ụzọ, nke ndị ọrụ ga-enwe ekele maka.
Cubot KingKong 5 Pro biara na ngwaike di ike, obu ezie ọ bụghị nke kasị elu dị anya na ya. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị bụghị otu n'ime ndị na-achọ a mobile maka gaminggba Cha Cha ma ọ bụ elu arụmọrụ, na ihe ọ integrates ga-ezuru gị. N'ezie, ọ bụrụ na ọ bụ mkpanaka gị nke abụọ maka ọrụ, ọ ga-ezuru oke.
Mee SoC Mediatek Helio A22 nke TSMC mebere ya na otu teknụzụ semiconductor kachasị elu na ụlọ ọrụ ahụ, ọ bụ ezie na ọ ka na-agbanye na 12nm ọnụ dị ka ọ bụ mgbawa 2018.
MTdị MT6761 na-etinye CPU 64-bit, yana 4 ARM cores Cortex-A53 na 2Ghz, yana Power VR GE8320 GPU. SKU a bịara na 4GB nke LPDDR RAM na 64GB nchekwa nchekwa dị n'ime. Ohere zuru ezu maka ọtụtụ ndị ọrụ.
O nwekwara igwefoto isi (azụ) abụọ sọrọ 48MP sensọ. Na mgbakwunye, Sony mepụtara ihe mmetụta ahụ, nke na-ekwe nkwa ịdị mma ya. N'ihu ihu, maka selfies, ọ bụ 25MP. N'aka nke ọzọ, na-ahapụghị ngalaba nke multimedia, anyị ga-egosikwa ọrụ dị egwu ha mere na okwu okwu stereo ha abụọ, oge mbụ Cubot rụsiri ọrụ ike iji melite ụda ahụ, iji mee ka ọ dịkwuo ezi uche, na olu dị elu, na enweghị mkpọtụ.
Na na a ga-atụkwasịkwara ya ikenyeneke mbiet Njikọta, na NFC maka Google Pay, GPS etinyere, GLONASS, BEIDOU, na Galileo, ka ị ghara ida ụzọ ...
Ngwa niile na njikọta sitere na KingKong 5 Pro chọrọ ike. Enyere ike site na batrị Li-Ion dị ike nke nwere nnukwu ikike, yana ole na ole 8000mAh, nke mere na ọ na-enye nnwere onwe dị oke elu na ngwaọrụ a. N'ezie, dị ka Cubot si kwuo, ọ nwere ike ịrụ ọrụ n'otu ụgwọ maka ụbọchị 3-5 zuru oke, nke dị elu karịa ekwentị ndị ọzọ.
CUBOT bụ emeputa nke smartphones na sistemụ arụmọrụ gam akporo, na casing siri ike, na ọnụ ala. Isi ụlọ ọrụ ahụ dị na China, sitekwa ebe ahụ ha na-echepụta ma mepụta ụdị ọnụ a nwere ike ịbụ nhọrọ kachasị mma maka ndị na-ese ihe, ndị na-akpụ brik, ndị na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ, ndị na-atụ ụlọ, ndị ọkwá nkà, na ọrụ ndị ọzọ ebe nkwụsị na ọdịda nwere ike ịbụ iwu nke ụbọchị .
Na mbido 2012, ha bidoro ire ụdị e weere dị ka aka nke ndị na-adịghị mma. Otú ọ dị, n'afọ ndị na-adịbeghị anya, àgwà itu ukwu ọ dịla mkpa. Ha abughizi ndi ngwucha nke gara aga, ebe obu na 2020, ogo bu akuku nke omume ha.
N'aka nke ọzọ, ụdị ngwaọrụ a nwekwara uru ọzọ, nke ahụ bụ na CUBOT na-etinye gam akporo dị ọcha na ekwentị mkpanaaka, na-enweghị ụdị ndakọrịta (UI) ndị nwere ekele maka ụdị ụfọdụ na ọ bụghị mmadụ niile nwere mmasị, ma ọ bụ tinye ngwa ndị arụnyere na-enweghị isi. Nke ahụ bụ, n'ụdị ihe nlereanya a ị na-echefu banyere bloatware ma ọ bụ crapware, yabụ ị nwere ike ịnwe mkpanaka nkeonwe ka ịchọrọ.
Cdị CUBOT agbachitere na nkwukọrịta ọhụrụ ya na onye oru ikpe azu bu onye nwe ya nke smartphone, ya mere na ya na naanị ya nwere ikike ịhọrọ ngwa ahụ. Ihe na-abụghị ikpe na ọtụtụ ụdị. Tụkwasị na nke a, ụdị ndị a na-egbochi ụdị ngwa ndị a ma enweghị ike iwepụ ya, belụsọ ma ị gbanyere ekwentị ahụ.
N'ezie, ịbụ ndị siri ike mobiles, ụdị ndị a na-atụ anya mgbe niile ịnapụta ihe ha kwere nkwa. Ya mere, na iyi na iguzogide uleNakwa dị ka ogo dị mma nke ngwaahịa CUBOT, dịka KingKong 5 Pro, ha anaghị ada mbà. Mkpọchi ya, njikọta ya, ma ọ bụ enyo ya gafee nnwale nnwale siri ike, yana ịrụ ọrụ. Ihe si na ya pụta bụ ekwentị dị mma na obere ego.
Ma ọ bụrụ na nke ahụ dị ntakịrị n'anya gị, n'ụdị ndị kachasị ọhụrụ, dị ka KingKong 5 Pro, CUBOT ahọrọla batrị mbughari, dị ka na mbụ. Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ndị nrụpụta na-etinye ha na enweghị ike iwepụ ya, ihe na-eme ka ọtụtụ ndị ọrụ nwee olileanya. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-enweghị mmasị na nke a, ịnwere ike ịhọrọ CUBOT, ka ị ghara ịdabere na ọrụ teknụzụ ma ọ bụrụ na ihe a mebiri ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » KingKong 5 Pro ala siri ike, nwere nnwere onwe na nguzogide dị ukwuu
Egwuregwu RPG kacha mma 33 maka gam akporo